ပြုံးရင်းနဲ့ စား.. အဲ.. အဲ...
Not so funny - အဖွား ရောင်းမည်
အဖွားရောင်းမည်။ (ရောင်း ဈေးအကန့် အသတ်မရှိ။)
အသက် - ၆၁နစ်
ကောင်းချက် - ချစ်စရာကောင်းသော ပုံပြောတတ်သည်။
မကောင်းချက် - နားငြီးအောင် ဆူတတ်သည်။
သူ့ အကြိုက် - လဘက်ရည်၊ ကာဖီ
အမြင့်ဆုံးဘစ် - ပေါင်၂၀၀၀
ဈေးပြိုင်ဆွဲသူပေါင်း - ၂၇ ယောက်
အိမ်နေရာ - Clacton-on-Sea
ရောင်းသူ - ၁၀နစ်သမီး မြေးမလေး
နေရာ - အီးဘေး
မြည်တွန်တောက်တီးတတ်သော အဖွား Marion Goodall အား အသက်၁၀နစ် အရွယ် မြေးမလေး Zoe Pemberton က အီးဘေးတွင် ရောင်းနေပါသည်။ သင် ၀ယ်လိုက ပေါင်၂၀၀၀ ထက် ပို ဈေးပေးပြီး ၀ယ်ပါ။
လက်ရှိ ၂၇ ယောက် ဈေးပြိုင်ဆွဲနေပါသည်။
(အီးဘေးမှ တုန့် ပြန်ချက် - လူကို လေလံတင်ခွင့်မရှိ သဖြင့် အီးဘေးမှ ပယ်ဖျက်ထားပါကြောင်း )
Animal - ဘယ်သူပြိုင်လို့ တုပါတော့နိုင်
သတင်းဌာန - ဘီဘီစီ
မှတ်တမ်း အစီအစဉ် - တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်
မင်းသား - the lyrebird
ပြပွဲ အချိန်ကာလ - ၄-၈ မိနစ်
ပြသမှု့- အချက်ပေးကားသံ၊ လွှဖြတ်သံ၊ မီးသတ်ကားသံ၊ မျိုးမတူငှက်များ အသံ၊ ကင်မရာ ရိုက်သံ၊ ခွေးဟောင်သံ၊ ကလေးငိုသံ
Food - Better Half သူတ၀က် ကိုယ်တ၀က်
ပန်းတပွင့်တည်းမှာ တခြမ်းစီ အရောင်၂မျိုး အဖြူ၊အ၀ါ
William Underwood, 73, in his garden in Cavendish, Suffolk.
ပန်းသီးတလုံးတည်းမှာ တခြမ်းစီ အရောင်၂မျိုး အနီ အစိမ်း
Mr. Ken Morrish, 45 yrs old at Colaton Raleigh, near Sidmouth, Devon.
at 3:12 AM3comments
Health - သတိပေးခြင်း legal party drug
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ တားမြစ်ထားပေမဲ့ legal party drug ကိုတော့ တရားဝင် ရောင်းချ ပေးထားပါတယ်။
အသက်၁၈နစ်သာ ရှိသေးတဲ့ Mikaila Tyhurst ဆိုသူဟာ အဲဒီ မူးယစ်ဆေးဝါး ကို စတင် သုံးစွဲ လာရင်းနဲ့...
သူမ အသက် ၂၂ ရောက်တဲ့အခါ မှာ အဲဒီ မူးယစ်ဆေးဝါး ကြောင့် သူမဟာ....
သိချင်ရင် Read More ကို ကလစ်လုပ်ကြည့်ပါ
Animal - ပြုံးတုံ့ လှယ်
ကမ္ဘာ... အင်း .. မှားလို့စကြာဝဌာအတွင်းမှ သက်ရှိသက်မဲ့ များ၏ အပြုံးများ
အမှား ပြင်ဆင်ခြင်း "စကြာဝဠာ"
ဒါက တော့ ပင်လယ်အောက် က ပြည်ကြီးငါး ပါ
င်္အဂါဂြိုလ် မျက်နှာပြင်ကို အာကာသ စခန်းမှ ရိုက်ထားပုံ
အမှားပြင်ဆင်ခြင်း အင်္ဂါဂြိုလ်
ယူကေ အိမ်တွင်းစိုက် ပန်းငြုတ်သီး, မက်ဆီကန်က မျိုးစေ့
တွေ့ ရှိပုံ - စားခါနီး ခွဲသောအခါ အပြုံး ၂ခုကို တွေ့ 
ဟာဝါရီမှ ပင့်ကူဖြစ်ပါသည်။ Theridion grallator အမည်တွင်သော ပင့်ကူပေါ်တွင် ပေါ်နေသော အရိပ်ပုံ များကြောင့် the happy-face spider ဟု နာမည်ကျော်ကြားပါသည်။
ထပ်ထည့်ခြင်း ။ဟာဝါရီ"ဆိုတာ "ဟာဝိုင်အီ"နဲ့ ဘာကွာပါသလဲခင်ဗျာ?
ဘာကွာသလဲ ဆိုတော့ဝိုင်ပါတာနဲ့မပါတာဘဲ ကွာပါကြောင်း ကျနော်မြင်ပါတယ်။
၀ိုင်ပါတာကိုဘဲ ကြိုက်ရင် နောက်တခါလာလည်ရင် ၀ိုင်တပုလင်းဆွဲခဲ့ပါခများ
Remark: I have read about one smiley face stingray in the newspaper but unable to find. May be next time:
at 1:56 AM6comments
Food - Carrot Hand- လက်နီကြီးလာပြီ
Peter Jackson, အသက်66နစ် ဆိုသူ ၏ ဥယျာဉ် တွင်းမှ သဘာဝအလျောက် လက်ပုံစံ ဖြစ်နေသော မုန်လာဥနီ
နေရာ Shropshire အင်္ဂလန်
Art - Image of Last dessert! toothpick သွားကြားထိုးတံအနုပညာ
TV presenter Stan Munro သည် ၆နစ်တိုင်တိုင် သွားကြားထိုးတံဖြင့် ကမ္ဘာကျော် အဆောက်အဦး ပုံစံငယ်များ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည။ ကော် ၁၇၀ လီတာ သုံးခဲ့ရပြီး အချိန်ပြည့် တည်ဆောက်ခဲ့သော အနုပညာများမှာ အလွန် စွဲဆောင်မှု့ ရှိပါသည်။ သူ တည်ဆောက်ခဲ့သော အဆောက်အဦး များတွင် Big Ben, Tower Bridge and The Vatican ဗီယက်နမ်မှ Angkor Wat ဘုရားကျောင်းဆောင်၊ Sydney's Opera House, the Taj Mahal and Cutty Sark များကို 1:164 scale စကေးဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။
သွားကြားထိုးတံကို နောက်ဆုံးစားသော အချိုပွဲ Last dessert ဟု တင်စားခေါ်ပါသည်။
Fashion - ခြေချောင်းပါသော ခြေစွပ် Vibram FiveFingers
အီတလီကုမ္မဏီ Vibramမှ ခြေချောင်းတခုချင်းစီ စွပ်နိုင်ရန် ခြေထောက်ပုံစံ အတိုင်း ချုပ်လုပ်ထားသော ခြေစွပ်ကို ၂၀၀၆ တီထွင်လိုက်ပါသည်။
ခြေချောင်း၅ချောင်းပါသော ခြေစွပ် ကို နောင်တချိန်တွင် အားကစား လောကတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာ ကြမည် ဟု မှန်းဆရသည်။ ခြေချောင်းတခုချင်း စွပ်ထားခြင်းကြောင့် ခြေဆစ်များ၊ ဒူးများ ယောင်ယမ်းခြင်း၊ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်သကဲ့သို့စီးသည့် အခါတွင်လည်း သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်စေသည် ဟု အသုံးပြုသူများက ပြောကြပါသည်။
ခြေစွပ်ဝတ်ထားလျှင် မြေကြီးကို သမရိုးကျ ဖိနပ်များကဲ့သို့ ဖနောင့် မှ ထိတွေ့ ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ခြေဖ၀ါးအလယ်မှ ထိတွေ သဖြင့် ခြေဗလာ ဖြင့် လမ်းလျှောက် သကဲ့သို့ သက်တောင့် သက်သာ ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ပါးလွှာသော ရာဘာ ဖြင့် ခြေချောင်းများကို ခြားနား ထားသည်။ ရိုဂလေ့ကျင့်သူများ သဘောင်္သားများ ကရာတေး ကစားသူများအတွက် ရည်ရွယ် ထွင်ခဲ့သော်လည်း အပြေးသမား များ အားကစားသမားများ က ပို အသုံးပြုသည် ကို တွေ့ ရပါသည်။
ပါးလွှာသော ခြေစွပ်သည် စတာလင်ပေါင်၈၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိပါသည်။
Come on! Boxer Mohamed cALI
otheman62 said ... "This is what my cat does every time we watch boxing."
Vegetable - Duck Potato
အင်္ဂလန် နိုင်ငံ Suffolk ခရိုင်တွင်းမှ Ipswich မြို့လေးတွင် အသက် ၄နစ်သား Zachary Clouter လေးသည် သူ ၏ မိဘများနှင့် အတူ ခြံအတွင်း စိုက်ထားသော အာလူးကို တူးရာ ဘဲကလေး နှင့် ပုံစံတူသော အာလူး ကို
Technology3D Camera
ရောင်းဈေး - စတာလင်ပေါင်၅၇၀
The FinePix REAL 3D W1camera မှန်ဘီလူး၂ခု၊ sensors set ၂ခု ပါပြီး third dimension ကို integrated processor ဖြင့် ရုပ်ကြွ စေပြီး ပုံရိပ်ကို မတူညီသော ဒေါင့်၂ခု ပုံရိပ် အလွှာထပ် ပြီး မြင်စေနိုင်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံရိုက်သူမှာ အနီရောင် အစိမ်းရောင် မျက်မှန် တပ်စရာ မလိုဘဲ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ကင်မရာ သည် စပါယ်ရှယ် 3D effect ပါ ရိုက်နိုင်ပြီး ကင်မရာ၏ 800x600 resolution LCD screen တွင် ပုံရိပ်ကို ပြန် ကြည့် နိုင်ပါသည်။ ၂.၈ လက်မ LCD screen တွင် ပြန်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ကင်မရာကို အလျူမီနီယမ် ဖြင့် တည်ဆောက် ကာ မှန်ဘီးလူးကို လှုပ်ရှားမှု့ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
ကင်မရာတွင် 3x optical zoom ပါရှိသည်။ 'interval shooting' ခေါ်သော ရိုက်ချက်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေသော ကား လေယာဉ်ပျံ ပေါ်မှ ရိုက်နိုင်ပြီး ပုံရိပ်ကိုပြတ်သားစေပါသည်။
Fashion - ဆံကေသာ လှစေဖို့Spin curl စက်
လိမ်မှ ကြိုက်တဲ့ မိန်းခလေးတို့ အတွက်
တီထွင်သူ ။ ။Brian Coombes
အသက် ။ ။ 32 နစ်
အလုပ်အကိုင်။ ။ Blonde salon ဆံပင် အလှပြင်ဆိုင်
စက် ။ ။ဆံပင်လိမ်စေသော ဆံပင်အခြောက်ခံစက်
နေရာ ။ ။ Castle Meadow, Norwich, England
လိမ်လိုသူ၊ အလိမ်ခံလိုသူများ လိမ်မည့် စက်ကို ၀ယ်လိုပါက ဆက်သွယ်ပါ
လိမ်စေရမည် ကုမ္မဏီ လိမ်မိတက်
Fashion - မော်ဒယ်မောင်တို့ လာချေပြီ
မနေ့ က သတင်းစာထဲမှာ ဖက်ရှင်မောင် ပြိုင်ပွဲဆုရ ဓါတ်ပုံများ တွေ့ လို့ကျနော့်ရဲ့ ပို့ စ်အဟောင်းမှာ ထပ်ဖြည့်ရင်း အပ်ဒိတ် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဆုရ ဖက်ရှင်မောင် အသစ်များနဲ့ဖက်ရှင်မောင် အဟောင်းများ ကို အမျိုးသမီး ဘလော့ ဖတ်သူအပေါင်း အလွန် အမင်း စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဖက်ရှင်မောင်များအား မိတ်ဆက် လိုပါက စာရေး မေးမြန်း နိုင်ပါ သည်။
အခမဲ့ မြှားနတ်မောင် အေဂျင်ဆီ
စာရေးသူ၏ အကိုကြီး သည် ငယ်စဉ်အခါကထဲက သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေတတ်သူ တဦးဖြစ်သည်။ အလှအပ အလွန် ကြိုက်သူလည်း ဖြစ်သည်။ တနေ့ သော အခါတွင် ဂျပန်လူမျိုး သူငယ်ချင်းနှင့် ရင်းနီးပြီး အလွန်ခင်မင်သွားခဲ့သည်။ ထိုသူမှာ မျက်နှာတွင် မုတ်ဆိပ်မွှေး ပုသိုင်းမွှေးများဖြင့် ပြည့်နက်နေရာ မျက်နှာတွင် မျက်လုံး နှာခေါင်း သာ ပေါ်ပြီး ပါးစပ်နှင့် မျက်နာ အောက်ပိုင်း တခြမ်းမှာ ထူထဲသော အမွေးများဖြင့် ဖုံးအုပ်နေသည် ကိုသာ တွေ့ ရသည်။ စာရေးသူတို့ ၏ ဖခင်မိခင် မျိုးရိုး တွင် ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိပ်မွှေး မရှိကြသဖြင့် အကိုကြီးမှာ နှတ်ခမ်းမွှေး မုတ်ဆိပ်မွှေး နည်းပါးရုံမက ဇာဂနာဖြင့် နုပ်နိုင်ရုံ မျှသာ အရည်အတွက်ရှိလေသည်။ အကိုကြီးသည် သူ၏ သူငယ်ချင်း ကဲ့သို့အမွှေးဖုံးသော မျက်နာပိုင်ဆိုင်ချင်သောကြောင့် နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ ဘရိတ်ဓါးဖြင့် မျက်နှာ အောက်ပိုင်း တခြမ်းလုံးကို ရိတ်ပါသော်လည်း ပါးသိုင်းမွှေး မကြမ်းရုံမက မုတ်ဆိပ်မွှေးလည်း ထပ်မထွက်၊ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း အတိုင်းပင် ရှိနေရသကား နောက်ဆုံး လက်လျော့လိုက်ရချေသည်။ မုတ်ဆိပ်ရိတ် ဘရိတ်ဓါးကို စိတ်နာစွာဖြင့် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ချိုးချေပြီးသကာလ မုတ်ဆိပ်ရိပ် ကိရိယာကို လွှင့်ပစ်လိုက်သဖြင့် ထိုအချိန်က ၆နစ်သား မျောက်လောင်း ဖြစ်သော စာရေးသူ အတွက် ကစားစရာ တခု တိုးသဖြင့် ၀မ်းသာခဲ့ရ ပါသည်။ သူ ၏ မထွက်လေ သော ပါးသိုင်းမွှေး မုတ်ဆိပ်မွှေးများကို ကျေးဇူးတင် သော အလို့ ငှာ ယခု ပို့ စ်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု ပေးလိုက်ရ ပါသည်။ ဖက်ရှင်မောင်များကို စာရေးသူ၏ အကိုကြီးသာ တွေ့ ပါက မည်သို့ မည်ပုံ စိတ်လှုပ်ရှားမည် ကို မခန့် မှန်းတတ်သော်လည်း စာဖတ်သူ များ ရင်ခုန်သွားချေမည်လော ဟု မှန်းဆနေမိပါသည်။
အသေးစိတ် သိလို ပါက...
ချားလော သည် အသက်၂၂နစ်မှစပြီး နှတ်ခမ်းမွှေးကို ထားရှိခဲ့ရာ (နှတ်ခမ်းမွှေးစံချိန် ၁၆လက်မ) ယင်း၏ နှတ်ခမ်းမွှေးကြောင့် နောက်ပြောင်သူများအား ရိုက်နက် သတ်ဖြတ် ရှိခဲ့ သဖြင့် တရားရုံးမှ နှတ်ခမ်းမွှေးနှင့် ပတ်သက်သော အမှု ကင်းပပျေက် စေရန် သူ ၏ နှတ်ခမ်းမွှေး ကို ရိတ်ပစ်ရန် ချမှတ်လိုက်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနစ်တွင် သူ ၏ နှတ်ခမ်းမွှေး ကို နောက်ပြောင်မိသော သူ့၏ အကိုအား ဓါးဖြင့် ထိုးသတ်မှု ကြောင့် ထောင် ၄နစ်ကျခဲ့ဘူးသည်။
Label: Fashion, Funny
Extra-Ordinary Moving house အိမ်ရွှေ့ ခြင်း
လူတကာ နားလည်တဲ့ အိမ်ပြောင်းတယ် ဆိုတာ နေထိုင် တဲ့သူ က အိမ်တအိမ် ကနေ နောက်တအိမ်ကို အထုတ် အပိုးသယ် ပြောင်းသွားတာပါဘဲ။ အိမ်ရွှေ့တယ် ဆိုတာက အိမ်ကြီး တခုလုံး ကို တနေရာက တနေရာ ပြောင်းရွှေ့တယ် ဆိုလိုပါတယ်။
ဗစ်တိုရီးယားခေတ် က ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်(+သစ်သား) ၂ထပ်အိမ်ကို မိုင်၁၀၀ ကျော် မှာ ရှိတဲ့ နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ နိုင်တဲ့ အဖွားကို ဂုဏ်ယူလေးစားသောအားဖြင့် တင်လိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ မြို့ လယ်ခေါင် လမ်းမ ကို High street လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စစ်ပြီးခေတ်မှာ မြို့ ကို တိုးချဲ့ ပြောင်းလဲ ဖို့လိုလာတော့ မြို့ လယ်မှာ ရှိတဲ့ အိမ်တွေ ကို ဖျက်ပြီး လမ်းချဲ့ ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ အိမ်တအိမ်လည်း အပါအ၀င်ပါ။
သူမ အနေနဲ့ဒီအိမ်ဟာ ဘဝရဲ့ တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ အသက် ၁၁နစ်မှာ သူမ အဖေ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အချိန်မှ စပြီး သူမတို့ငွေကြေး ကြပ်တည်း ဆင်းရဲ သွားတဲ့ အတွက် အသက် ၁၆နစ်မှ စပြီး စစ်ဌာနမှာ ပုံဆွဲ အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့ ပြတွေ ကို ပြောင်းလဲ ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့ အတွက် မြို့ လည်ခေါင် လမ်းမ ခင်းဖို့သူမရဲ့ အိမ်ဖြိုမည့် အမိန့် ရလာပါတယ်။ ၁၉၄၇ မှာ သူမ ၀ယ်ခဲ့တဲ့ အိမ်ကလေး ကို ဘယ်လို မှ မစွန့် လွှတ်နိုင်ပါဘူး။
သူမ အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာက အုတ်တချပ်ခြင်း၊ တိုင်တတိုင်ခြင်း၊ ကြမ်းခင်း သစ်သား တချပ်ခြင်း၊ သံတခုခြင်း အရွယ် အစားတွေ က အစ နံပါတ်စဉ် တပ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ ထားတယ် ဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှ စတင်မှတ်တမ်း တင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အိမ် အဖျက် မခံရအောင် မြို့ နဲ့ ဝေးတဲ့ မိုင်၁၀၀ အကွာက ဆင်ခြေဖုံးနားမှာ အိမ်ကို ပြန် တည်ဆောက် ခဲ့ပါတယ်။
THE EXTRAORDINARY STORY OF MAY SAVIDGE AND THE HOUSE SHE MOVED by Christine Adams with Michael McMahon, published by Aurum today at £16.99. To orderacopy at £15.30 (p&p free), call 0845 155 0720.
Reporter: Zoe Brennan
Dressed inaworkman's apron, her greying hair tucked beneathaheadscarf, she single-handedly piled high the thousands of hand-made Hertfordshire peg tiles from the roof.
Back in business: Ware Hall House, now in Norfork, isaB&B run by May's niece, Christine Adams
Broken-hearted: When her fiance died, May bought Ware Hall House in 1947 to restore
Number 1 Monkey Row, Ware, Hertfordshire, had been built around 1450 forawealthy monk asa'hall house',amedieval arrangement in which the living space is attached to an open hall overlooked byaminstrel's gallery.
Battle began. May dug her heels in and resolved to save the building. For 15 years, she fought the council's plans, writing to them: 'If this little house is really in the way, I would rather move it and re-erect it than see it destroyed.'
Long haul: May carried the timbers herself to the lorries that would move her house
Jigsaw puzzle: Each beam is numbered according to May's floor plans
'I just won't have suchamarvellous old house bulldozed into the ground,' she said. 'I've got nothing to do all day, so I might as well do the job myself.'
Strangers sent money to help her - and many became life-long friends. 'Yours is the spirit that once made Britain great,' wrote one.
A caravan was her home while she began the new work. It was often unbearably cold, but, as she told the Fakenham Ladies Circle Club in 1971: 'My mother brought us up on the maxim that there is no such word as "can't".'
On the tiles: May, with her dog Sasha, painstakingly inspects the tons of roof tiles
By now, however, she was running out of steam. In 1992, she finally installedasmall wood-burning stove to heat the house, but was having difficulty climbing ladders and found cement work 'a bit heavy'.
On her death in 1993, just before reaching the age of 82, the house was still not finished. 'The walls were up and the roof was on, but the place was little more thanashaky shell,' says Adams, who was left the house in her aunt's will.
A collector extraordinaire, May had filled her home until it looked like an overstocked curiosity shop. In the garden, nine sidesaddles languished, relics ofabygone age. Boxes of unworn wartime nurses' bonnets and May's service medals lay at the bottom of heavy trunks, stacked to ceiling height.
She kept packets of old-fashioned soap powder, Omo, Oxydol and the like, alongside bottles of J Collis Browne's Mixture, the Victorian cure-all.
There were thousands of train, bus and trolley bus tickets, and even the notes left by the milkman.
In 440 diaries, she listed every action she carried out each day, revealingaBritain now lost:aworld of shillings and ounces, telegrams and typewriters.
Among this archive, Adams uncovered May's tragic secret. After her fiance's death, she had entered into another secret liaison -a17-year courtship withaman she believed would marry her.
Inadevastating letter, dated 1960, he reveals to her that he has simultaneously found God and fallen in love with his cousin, writing: 'I have, thanks to God, seen my dear cousin Iris inanew and wonderful light.
'I know this will hurt you as I know only too well how you feel towards me. I pray to the Lord that you, too, may experience this most wonderful love.
'I should like nothing better than for you to regard us asanew sister and brother. I would like to bring Iris to see you when you feel like it, I know you, too, will love her - everybody does!'
Clearly cut to the quick, May wrote back: 'It surprises me that anyone so dear and lovable as your Cousin Iris should have thought it right to come between us, after 17 years. My heart is not made of stone. You often spoke of our marriage. Is it surprising that I thought you really cared? I hope you will be more faithful to Iris than you have been to me. Goodbye.'
Next to these letters wasaphoto of her fiancée playing Hamlet. Adams says: 'Auntie May had wrapped her broken heart inaparcel, tied it with string and hidden it at the back of the attic. Looking through those letters, I could see that she had not becomealoner through choice.'
In tribute to her stoical aunt, Adams took on the project of finishing the house, and in the end it was May's hoarding instincts which breathed new life Ware Hall House. Adams sold May's memorabilia, raising funds to renovate the house, which she now runs asabed and breakfast.
Through her extraordinary habits, May effectively financed the final building work from beyond the grave.
After everything and against all the odds, she had won - she had moved her house across Britain and defied the developers.
Art - Image of Last dessert! toothpick သွားကြားထို...
Fashion - ခြေချောင်းပါသော ခြေစွပ် Vibram FiveFing...